Alarobia, Febroary 23, 2022 Alarobia, Febroary 23, 2022 Douglas Karr
Manao tetik'asa fifindra-monina sy fampiharana ny mpanome tolotra mailaka ho an'ny mpanjifanay izahay. Na dia tsy voafaritra matetika ao amin'ny fanambarana momba ny asa aza izany, ny paikady iray izay apetrakay foana dia ny fiantohana fa ny fifandraisana amin'ny mailaka dia voamarika ho azy miaraka amin'ny mari-pamantarana UTM mba ahafahan'ny orinasa mahita ny fiantraikan'ny marketing amin'ny mailaka sy ny fifandraisana amin'ny fifamoivoizana amin'ny tranokalany. Tsipiriany manan-danja izay matetika atao tsinontsinona… fa tsy tokony ho izany mihitsy. Inona ireo
Alatsinainy Janoary 17, 2022 Alarobia, Febroary 23, 2022 Douglas Karr
Alarobia, Martsa 31, 2021 Talata, May 11, 2021 Douglas Karr
Ampiasao ity fitaovana ity hanamboarana ny URL fampielezan-kevitra Google Analytics. Ny endrika dia manamarina ny URL-nao, misy lojika raha efa manana querystring ao anatiny izy, ary manampy ny variable UTM mifanaraka aminy: utm_campaign, utm_source, utm_ Medium, ary utm_term sy utm_content tsy voatery. Raha mamaky izany amin'ny alàlan'ny RSS na mailaka ianao, kitiho ny tranokala hampiasa ilay fitaovana: Ahoana no fomba hanangonana sy hanarahana ny angon-drakitry ny fampielezan-kevitra ao amin'ny Google Analytics Ity misy horonantsary feno momba ny fandrindrana